Waamicha Yaadannoo - Fireworks hin bitinaa! -
Yaa ilmaan Oromoo waan amma kana nurra gahaa jiru, tokko kan biraati himuu hin danda`u hundi keenya ni beekna Sammuu keenyas nu cabsaa jira, irra deddeebi’uun barbaachisaa na hin fakkaatu. Kan ta‘u qabu garu iddoo jirru hundatti ‘saba keenya dhumaa jiruf maal gumaachuu dandenya?’ jennee karaa tarkaanfii fudhachuutti ceehuu qabna jedheen amana. Kanaaf, nuti Orommonni biyya ambaa jirru waan godhu dandeenyu keesaa:
Hiriira baanee waan Saba keenya irra gahaa jiruu iddo jiraanuu hundatti beeksiifachuu,
Qabeenyaa fi beekumssa qabnuun qaqaaruu fi wal-quba qabaachuun waan barbaachisaa ta`an keesaa isaan xinqaadha.
Amma yeroo waggaan haaraa dhufaa jiru kana warra biyaa fakaachuf nutis ‘Fireworks’ gubuun yookii dhukaasuun keenaya hin oolu. Akka herrega kiyaati naanno Auropaatti yoo xiqqaate maatiin tokko Euro 10 hanga Euro 50 baasaa, kan naannoo biraa herreguun garuu na dhiba.
Oromoota hundaaf waamicha ani qabu, mee guyyaa kana hundi keenya ‘Fireworks’ gubuu yookii dhukaasuu dhiifnee, waloonis haa ta`u akka nama tokkoti:
Guca xiqoo qabsiifnee Obboleewwan keenya ajjeefaman, mana hidhaa jiran, qe’ee isannii irraa baqatanii dhokatanii jirani fi haadholii ilmoon jalaa ajjeefamee(ajjeefamtee) gaddaa irra jiran ittin haa yaadannu.
Horii Fireworksf baasnus iddo tokkotii sassaabnee, gargaarsa saba keenyaaf haa goonu. As irratti wanti hubatamuu qabu guddina horii osoo hin taane, nuti iddoo jirru hunadaatti sa`aa gabaabduu keessatti bara 2015 gadda qabnu fi abdii bara haaraa 2016 irratti qabnus waliin hirmaachuu keenya, kana malees ijoolleen keenya biyya ambaatti dhalatan gadda keenya sirriitti beeksisuu fi hubachiisuunis barbaachisaadha.
Mangudoon hin salphatiin!
Imiimmaan haadholii fi shamarran Oromoo qooruu qaba!